Villa Somalia - Golaha Wasiirada
Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya
H.E Xasan Cali Khayre
Ra'iisul Wasaaraha masuuliyadihiisa waxaa ka mid ah, magacaabista ama casilidda wasiirada, ku hagidda iyo hogaaminta golaha wasiirada hiigsiga dowladda iyo ahaanshaha qofka 1aad ee matala barnaamijyada dowladda dhanka Golaha Shacabka iyo dibadda.
Ra'iisul Wasaare Ku-xigeen
Masuuliyadda Ra'iisul Wasaare Ku-xigaanka waxay la mid tahay tan Ra'iisul Wasaaraha.
Xasan Xuseen Xaaji
Wuxuu masuul ka yahay Garsoorka & Cadaaladda Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda & Iskaashiga Caalamiga
Masuuliyadda guud waa ka shaqeynta iyo sii horumarinta masaalixda Qaranka, iyo dhowrista masaalixda Soomaaliya ee dibadda dhanka siyaasadda iyo dhanka maalgashiga.
Masuuliyadda waa maamulka iyo maareynta dakhliga iyo kharashaadka Qaranka. Kobcinta soo uruurinta dakhliga dalka iyo baahinta kheyraadkiisa.
Cabdirashiid Cabdullahi Maxamed
Masuuliyadaha Wasiirka waxaa ka mid ah isku-xirka iyo jiheynta wakaaladaha dowladda ee ka shaqeeya amniga Qaranka iyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaana ah qofka ugu sarreeya ee xukuma Ciidanka Qalabka sida ee Qaranka.
Cabdi Faarax Saciid (Juxa)
Wasaaraddu waxay masuul ka tahay arrimaha la xiriira amniga, federaalka, waxaana hoos yimaada wakaaladaha socdaalka iyo amniga.
Wasaaradda Beeraha Iyo Horumarinta Reer Miyiga
Qaybaha masuuliyadaha wasaaradda waxaa ka mid ah horumarinta beeraha iyo reer miyiga, iyadoo la sugayo cunada iyo sidii waxsoosaarka beeraha Soomaaliya loo xoojin lahaa, una noqon lahaayeen badeeco loo suuq geeyo caalamka.
Maxamed Abuukar Ducaale
Masuuliyadaha waxaa ka mid ah dhowrista amniga gudaha, masuuliyadda booliska iyo NISA, iyo la dagaalanka argagaxa.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan
Wasaaraddu waxay masuul ka tahay baahinta adeega waxbarasho tayo leh, si'uu muwaadin walba u kasbado aqoon iyo xirfad gaarsiin karta heersare, una kobco dhaqaalaha Qaranka.